अनलाइन फ्री भर्चुअल जोर्जियान किबोर्ड लेआउट | Loderi.com
भर्चुअल जोर्जियान किबोर्ड अनलाइन
भर्चुअल जोर्जियान किबोर्ड अनलाइन मुक्त
तपाईं अनलाइन जोर्जियान मा टेप कुरा चाहिन्छ भने, तर एक कम्प्युटर वा ल्यापटप अंग्रेजी लेआउट मा - तपाईँले आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनमा भर्चुअल जोर्जियान किबोर्ड आवश्यक छ। यो प्रयोग गर्न सजिलो र सुविधाजनक छ। साइट मा तपाईंलाई रुचि छैन या केहि काम छैन वा साँचो छैन गर्छ कुरा हो भने - हाम्रो थाह दिनुहोस्। यो हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। Loderi.com जोर्जियान भर्चुअल किबोर्ड प्रयोग, तपाईँले बिल्कुल मुक्त र अनलाइन: • मनपर्ने जोर्जियान भाषा अनलाइन मा टाइप; • सीधा हाम्रो साइट देखि मित्रहरुलाई सन्देश पठाउन; • 1 क्लिक Google र YouTube मा खोज (नयाँसञ्झ्यालमाखोल्नुहोस् हुनेछ) • (नयाँसञ्झ्यालमाखोल्नुहोस् हुनेछ) एक क्लिक गुगल-अनुवादक प्रयोग अनुवाद • फेसबुक मा एक पोस्ट बनाउन र ट्विटर मा ट्वीट; • पछि लेखन जारी गर्न आफ्नो टिप्पणीहरू बचत (तपाईंले लग इन गर्न आवश्यक); • डाउनलोड गर्न र आफ्नो कागजातहरू छाप्न।
भर्चुअल किबोर्ड मा टाइप जोर्जियान - यो निशुल्क र सजिलो
हामी एक लामो समय Windows को लागि साइट इन्टरफेस र आफ्नो सुविधा लागि जोर्जियान किबोर्ड लेआउट लागि परीक्षण गरे। आफ्नो निगरानी स्क्रिनमा अनलाइन हाम्रो जोर्जियान किबोर्डमा टाइप गर्दा र अब हामी आफ्नो सान्त्वना मा विश्वस्त छन्। यहाँ तपाईं अनलाइन मानक जोर्जियान किबोर्ड (qwerty), फोनेटिक किबोर्ड र अर्को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चाँडै हामी वर्णमाला को रूप मा जोर्जियान किबोर्ड थप्न हुनेछ। यो फेसबुक र ट्विटर संग मित्र संग सम्पर्क राख्न, तिनीहरूलाई अनुवाद, मुद्रण र बचत, टेप पत्र धेरै सजिलो छ। अनि पाठ्यक्रम - Google खोज र YouTube मा भिडियो बिना इन्टरनेट भनेको के हो? यी सबै कार्यहरू एक क्लिक हाम्रो वेबसाइट मा गरेका छन् - यो प्रयास! साथै, तपाईं पछि तिनीहरूलाई जारी हुनेछ, (तपाईं फेसबुक, ट्विटर वा गुगल प्रयोग गर्नुहोस आवश्यक) आफ्नो मुद्रित कागजातहरू बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
प्राप्त र आफ्नो साइट मा आभासी जोर्जियान किबोर्ड प्रयोग गर्ने कसरी?
तपाईं पनि आफ्नो वेबसाइट मा हाम्रो लिंक, बटन, वा पूरै अनलाइन भर्चुअल जोर्जियान किबोर्ड स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ - यो तपाईं आफ्नो वेबसाइट वा ब्लग यहाँ देखि कोड कपी र पेस्ट गर्न आवश्यक छ। बस हामीलाई लेख्न र हराइरहेको छ वर्णन - हामी पनि तपाईं चाहिए लागि सुझाव गर्न खुला छन् (अधिक विस्तार - बेहतर) - तपाईं को आवश्यकता के हामीले हुनेछ!
अनलाइन अंग्रेजी किबोर्ड गर्न जोर्जियान देखि अनुवाद
अनलाइन जोर्जियान किबोर्डमा टेप पाठ अनुवाद गर्न, बस क्लिक «अनुवाद» नयाँ विन्डो गुगल द्वारा लोकप्रिय विश्वव्यापी अनलाइन अनुवादक खोल्न हुनेछ। पूर्वनिर्धारित गरेर, जोर्जियान देखि अंग्रेजी अनुवाद, तर यसको विवेकाधिकारमा कुनै पनि अन्य रोज्न सक्नुहुन्छ